5-ta Qoomamo ee ugu Badan ee Dadka Sakaraadaya W/Q: Shaakir Mohamed Abdullaahi - Tilmaan Media
Kalkaaliso Ustaraaliyaan ah oo lagu magacaabo Bronnie Ware ayaa waxay buug ka qortay waayo’aragnimada ay ka kasbatay 12 toddobaad oo ay la qaadatay dad ay daryeel caafimaad u samaynaysay oo la ildarnaa xanuun aan la filaynin in ay ka bogsadaan. Bronnie waxay buuggeeda ku diiwaangelisay shantii wax ee ugu badnaa oo ay dadku ka shallaayeen, jeclaan lahaayeen na in ay si kale u sameeyaan intii ay caafimaadka qabaan iyo ka hor inta aysan u caddaanin dhimasho ku soo socoto oo aan meel looga baxsado lahayn.
Waa kuwaan shantii qoomamo ee ugu badnayd oo dadka sakaraadaya laga diiwaangeliyay
1.Waxaan jeclaan lahaa in aan lahaado geesinnimo igu filan si aan u noolaado nolol aan runta isugu sheego ee aan ahayn midda ay dadka kale iga filayaan
“Tani waxay ahayd qoomamada ay dadka badankoodu sheegeen. Dadku marka ay xaqiiqsadaan in toodii ay gashay oo ay noloshoodii dib u milicsadaan, way sahlan tahay in ay fahmaan riyooyinka faraha badan oo ay xaqiijin waayeen. Dadka badankooda waxaa nafta laga soo doonay iyaga oo xataa haaf ka mid ah riyooyinkoodii aan xaqiijin, sababtuna waxay ahayd go’aanno ay qaateen ama aysan qaadanin. Caafimaadku wuxuu qofka siinayaa xorriyad ay dadka badankoodu ka war haynin ilaa ay waayaan.”
2.Waxaan jeclaan lahaa in aanan shaqo fara badan qabanin
“Sidaan waxaa ku tawaawacay bukaan walba oo lab ah oo aan daryeel u fidiyay. Waxay is gafeen dhallinyarannimada ciyaalkooda iyo la joogga waalidkooda. Dumarka laftoodu qoomamo tan oo kale ah way tilmaameen, balse waxay u badnaayeen kuwo ka mid ah facyadii hore, badi bukaannada dheddig kama mid ahaynin dadka qoysaskooda biila. Giddi raggii aan baaniyay waxay si daran uga shallaayeen in waqti fara badan oo nolashooda ah uu uga baxay xoogsi iyo shaqo.”
3. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhiirran karo tilmaamidda dareenkayga
“Dad badan ayaa dareenkooda qariya si dadka kale aysan isugu dhicin. Taasi waxaa ka dhashay jiritaan tayo xun iyo in dadkaasi ay weligood noqon kari waayeen ciddii ay awoodeen in ay noqdaan. Saa daraaddeed waxay dad badani taasi ka qaadeen hibasho iyo caloolxumo markii dambe jirrooyin isu beddelay.”
4. Waxaan jeclaan lahaa in aanan luminin xiriirka saaxiibbadey
“Alaa dadku ma gartaan faa’iidada saaxiibbadii hore ilaa arbaciinkoodu uu soo dhowaado, waana mar aysan awoodin in ay dib u raadiyaan saaxiibadooda. Badi dadku markii ay ku hawshoodeen noloshooda gaarka ah ayay si sibiq ah ku lumiyeen saaxiibtinnimo dahabi ah oo sanooyin soo jirtay. Waxaa jray qoomamooyin xanuun badan oo ku saabsan saaxiibtinnimo lagala dhabcaalay waqtigii iyo dadaalkii ay mudnayd. Qof walba marka uu dhimanayo ayuu saaxiibbadiis u xiisaa.”
5. Waxaan jeclaan lahaa in aan naftayda farxad badan siiyo
“Tani waa qoomamo si aad ah loo wadaago. Dadka badankoodu mar dambo ayay dhaadeen in farxaddu ay tahay doorasho (wax uu qofku isagu dooran karo). Waxay maxbuus u noqdeen caadooyinkii iyo hab-nololeedyadii hore ee gaboobay. Waxaa maskaxahooda iyo jirkooda kalaba ku soo fatahay waxa lagu magacaabo ‘bartii arag’ (qofku cabsi ayuu dareemaa marka uu u hollado isku dayga wax cusub). Cabsida ay ka qabaan isbeddelka ayaa ku qasabtay in ay dadka kale iyo naftoodaba u jilaan in ay faraxsan yihiin ama noloshooda ay ku qanacsan yihiin, halka ay qalbiyadooda si qoto dheer oo dhab ah ay ka dareemayeen hilow ay u qabaan in ay si hagaagsan oo run ah u qoslaan iyo in ay si caadi ah u dhaqmaan.”
Waa maxay waxa ugu weyn oo aad ilaa hadda ka shallaynayso, maxaadse qaban lahayd si aad taas u saxdo inta aadan dhiman?